Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » 2021 Tanànan'ny Park amin'ny alika amerikana tsara indrindra
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Tsy hahita habaka maintso mahaliana ho an'ny zaza ianao na aiza na aiza any Amerika, ary raha manao izany ianao, dia tsy hianjera daholo.
San Francisco dia mifehy ny ambin'ny tobin'ny alika amerikana sisa tavela ho tanàna laharana 1 tsara indrindra ho anay.
Boise, Portland, ary Henderson dia mirehareha amin'ireo zaridaina alika telo avo indrindra any Etazonia raha ahitsy amin'ny haben'ny mponina.
Ny tanàna lehibe indrindra an'ny Lone Star State dia mamarana ny laharana miaraka amin'ny rambony eo anelanelan'ny tongony.
Ny zaridainan'alika dia toerana mety hihaonan'ny alika kely - sy ny tompony. Na dia mandehandeha aza ny zanak'izy ireo, dia afaka mifanerasera amin'ny olona tia alika izy ireo.
Saingy tsy hahita habaka maintson'ankizy mahafinaritra na aiza na aiza ianao America, ary raha manao izany ianao, dia tsy ho maimay daholo izy ireo. Ka inona avy ireo tanànan'ny alika tsara indrindra amin'ny 2021?
Laharana 97 ny manam-pahaizana US tanàna mifototra amin'ny fidirana, kalitao ary toetrandro hahitana.
Jereo ny tanàna 10 iza no mitarika (sy ny 10 izay mihemotra) ny fonosana etsy ambany, arahin'ny fanasongadinana sy jiro vitsivitsy avy amin'ilay tatitra.
Tanànan'ny Park amin'ny alika 2021
6 Henderson, NY
Tanànan'ny Park amin'ny alika ratsy indrindra tamin'ny 2021
91 Cincinnati, NY
93 Newark, NY
San Francisco: Mpitarika ny fonosana: Ny Golden City dia mampanjaka ny ambiny amin'ireo tobin'ny zaridainan'ny alika amerikana ho toy ny tanànan'ny Dog Dog City tsara indrindra.
Ny alika dia sakaizan'ny lehilahy / vehivavy akaiky indrindra eto: ny alika (lazaina) fa maro noho ny ankizy - zanak'olombelona, ​​izany hoe - any San Francisco. Ka ara-dalàna raha nanokana habaka maintso betsaka ho an'ny iray amin'ireo mponina lehibe indrindra ao aminy ny tanàna. Raha ny marina, ny tanàna Golden City dia mihoatra ny tanàna 92 ​​hafa misy isan'ny zaridaina alika isaky ny mponina 100,000 (tongotra roa).
Ny mpivady izay mahavariana ny fidirana amin'ny Access (No. 5) miaraka amin'ny toetrandro milamina (No. 8), ary San Francisco dia mahazo mora ny antsasaky ny antsasaky ny Oakland mba hamaky ny toerana voalohany amin'ny ankapobeny. Ity tanàna ity dia mitondra fitiavana alika kely amin'ny ambaratonga vaovao.
West in Show: Tsy i San Francisco irery no tanàna tandrefana nangalatra ny sain'ny mpitondra. Tanàna efatra any California hafa, miaraka amin'i Portland, Oregon, ao amin'ny No. 3, Boise, Idaho, ao amin'ny laharana 4, ary Henderson, Nevada, ao amin'ny laharana faha-6 no mitaky ireo toerana hafa ao amin'ny 10 voalohany.
Ahoana no nahazoan'ny Tandrefana ny hazakazaka? Ny tanàna lehibe any Kalifornia dia mitaingina avo amin'ny toetrandro any Mediterane - mety tsara amin'ny fitsidihana mahafinaritra sy mandavantaona any amin'ny valan'alika. Boise, Portland, ary Henderson, etsy ankilany, dia mirehareha amin'ireo zaridaina alika telo avo indrindra ao amin'ny firenena rehefa novaina noho ny haben'ny mponina. Mipetraha miaraka amin'ny sakaizanao amina canine ao amin'ny iray amin'ireto tanàna ireto, dia hanangana alika kely iray ianao.
Tanànan'ny Texas ao amin'ny Doghouse: Ny tanàna lehibe indrindra an'ny Lone Star State dia mamarana ny laharana miaraka amin'ny rambony eo anelanelan'ny tongony. Ao amin'ny laharana faha-41, i El Paso dia tampon'ireo tanànan'ny Texas.
Mampalahelo fa misy tanàna dimy any Texas any amin'ny 10 ambany, ao anatin'izany ny Fort Worth, Arlington, ary Plano amin'ny toerana faha-88 ka hatramin'ny faha-90, ary Garland amin'ny faha-95. Maty farany i Laredo.
Inona no nahatonga ny fisehoan'izy ireo ratsy? Ny tsy fahampian'ny fidirana amin'ireo zaridainan'alika no tompon'andraikitra amin'ny ankapobeny. Ho an'i Laredo, tsy dia tsara ihany koa ny kalitaon'ny valan-javaboary mahantra indrindra raha ny marina, anisan'ireo tanàna norefesinay. Ratsy, Texas!